सम्बन्ध जोड्ने र छोड्नेहरुको शहरमा… « Naya Page
सम्बन्ध जोड्ने र छोड्नेहरुको शहरमा…
प्रकाशित मिति : 13 March, 2019 3:59 pm
‘दुःखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया राखी मलाई अझै दुःख दे’ लाग्छ, यिनै दुःखी मनुवाको जीवन पढेर यो भनाइ बनाइएको हो । कसैले सुख मात्र भोग गर्छ भने कसैको ललाटमा किन दुःख बाहेक केही हुँदैन ? त्यो भाग्यको दोष हो वा जति घोटिँदा पनि आँशुले नुहाउनुपर्ने कर्मकै खोट ?
म जीवनबहादुर रम्तेल । नुवाकोट चौघडामा जन्मिएँ–हुर्किएँ । २० वर्षअघि मनभरि सपना, झोलाभरि भविष्य बोकेर भित्रिएँ राजधानी खाल्डोमा । केही खुद्रा सपना थिए । आज ती सपना बिलाएका छन् फुसफुसे हिउँ घाममा पग्लिएझैं । जता फर्कंदा पनि चोट र पीडा मात्र दिएपछि उदासीनताबाहेक के पो बाँकी रहन्छ र ! यस्तो जिन्दगीको बह पोखेर के काम ? यो उमेरमा झेलेको छु दुःखैदुःखको अनगिन्ती पहाड ।
दायाँ फर्के पनि दुख्ने, बायाँ फर्के दुख्ने जिन्दगीले ठगेको दुःखी मनुवा हुँ । राजधानी भित्रिएको वर्ष दिन नबित्दै हाँस्न बिर्सिएँ । मनभरि भक्कानो गाँठो पारी शहरमा ठेला चलाइरहेछु । छैन कुनै ठूलो सपना । छ त केवल बिहान–बेलुका हातमुख जोर्नु, श्रीमतीका लागि मासिक औषधोपचार खर्च जुटाउनु । र, दुई अपांग सन्तानको मुहारमा खुशी भर्नु । लाग्छ योभन्दा बढी दुःख, कष्ट र सकस भोग्ने ठाउँ बाँकी हुन्न कतै पनि । योभन्दा तल खस्ने जमिन पनि बाँकी छैन अब ।
शुरुमा फुटपाथे व्यापार गर्थें । उत्तम व्यापार, मध्यम कृषि, अधम नोकरी भनेझैं कमाइ राम्रै थियो । आफू मात्र बाँचेको थिइनँ, घर परिवारका लागि खर्च पठाइरहेकै थिएँ । करिब १२ वर्ष यो पेशा गरेँ । व्यापारबाट आम्दानी हुन छाड्यो । कसैको लहैलहैमा लागेर रिक्सा चलाउन थालँे । भन्छन्, जन्म, मृत्यु र विवाहको सीमारेखा पहिल्यै तोकिएको हुन्छ ।
धादिङ जिल्ला ज्यामरुङ माइती भएकी जुनु गुरुङसँग विवाह भयो यही बीचमा । विवाह गरेकै रात एक्कासी चिच्याउने, डराउने खालको व्यवहार देखाइन् । विवाहपछि मात्र चाल पाइयो विमार रहिछन् । विवाह गरेर ल्याएकी अर्काकी छोरीको जीवन बर्बाद पार्ने कुरा पनि आएन । उपचार गरे निको होला, दीर्घरोग होइन भन्ने लाग्यो । औषधोपचार गर्न थालेको १५ वर्षभन्दा बढी भयो । धामी–झाँक्रीको पछि लाग्दैमा २ वर्ष गयो ।
कसैले बोक्सी लागेको भने कसैले मोहनी । लगनखेलस्थित पाटन हस्पिटल पुगें । डाक्टरले मानसिक रोगको लक्षण हो भने । १२ वर्ष भयो दिनको ४ ट्याबलेटका दरले औषधि सेवन गर्न थालेको । तर, रोग जस्ताको तस्तै । औषधि खान छाडे झन् बढी हुन्छ । छाड्ने कुरै भएन । घरमा सदावहार रोगी भएपछि काम राम्रोसँग गर्न पनि सकिएन । मनमा शान्ति भए मात्र सबैतिर उमंग छाउने रहेछ । बेचैनी बोकेर राम्रोसँग काम गर्न सकिँदो रहेनछ ।
भाडामा साहुको ट्याम्पो चलाउँथें कहिले के हुने, कहिले के सधैँ घाटामा जान थालेपछि छाडिदिएँ । जिन्दगी नै घाटामा गएका बेला अरूबाट नाफा खाजेर पनि नपाइँदो रहेछ । नमिल्दो रहेछ । ठेलामा तरकारी राखेर बेच्न थालेँ । त्यहाँ पनि घाटा मात्रै । काम खोज्दै गएँ । आफैंलाई धिक्कार्नु बाहेक अरू थिएन । मलाई जति परेको पिर, ठक्कर र हण्डर शायद कसैले व्यहोर्नुपरेको छैन । र, कामना गर्छु शत्रुलाई पनि यस्तो नपरोस् ।
यही बीचमा दुई छोरी र एक छोरा जन्मिए । हुने हार दैव नटार भनेझैं जेठी छोरीको घुँडा चल्दैन, जन्मजातै अपांग । छोराको पनि लडेर कम्मरको हाड भाँच्चियो । आफ्नै हेरचाह गर्न नसक्नेले सन्तानको हेरचाह कसरी गर्न सक्थी र उसले पनि । लडेर भाँच्चिएको कम्मरको हाड जति कोशिस गर्दा पनि जोड्न सकिएन । दैनिक १३ सय एमजीको औषधि सेवन गरिरहेको छ छोराले । कान्छी छोरीलाई होटलमा भाँडा माझ्न राखेको छु । घरमा चार जना छौं ।
यिनीहरूको औषधोपचारका लागि मात्र महिनामा ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । ठेला चलाउँछु, मजदुरी गर्छु, यहीँबाट आएको पैसाले घरखर्च चलाइरहेको छु । यतैका एक मनकारीले दिएको छाप्रोमा बसेको छु । यहाँ बसेवापत उनको घरको रेखदेख र सरसफाइ गरिदिनु पर्छ । यही बीचमा चोटमाथि अर्काे चोट थपियो । श्रीमतीको खुट्टामा पहिला सानो घाउ थियो । घाउ बढ्दै गयो । पछि त्यसैमा क्यान्सर भएछ । उपचारका लागि कहिले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, कहिले भक्तपुरतिर पुगियो तर रोग निको भएन । हुनेलाई जहीँतहीँ, नहुनेलाई कहीँ न कहीँ भनेझैं कतै केही जोर चलेन ।
१० वर्षअघि मातातीर्थमा जन्मजात अपांग छोरा जन्मियो । सुस्त मनस्थितिको । दुईवटै खुट्टा चल्दैन । हिँड्न छाडेको ७ वर्ष लाग्यो । कमाएको पैसाले मात्रै घरखर्च चल्दैन । ऋणमा चलेको छ जिन्दगी । ऋणमै चलिरहेछ घरबार । तीन वटा साहुको ऋण एक लाखभन्दा माथि तिर्नु छ । साँवा–ब्याज गरेर तिरिरहेको छु । कसैले सुनायो अपांगलाई राज्यले भत्ता दिन्छ । उपचार खर्च दिन्छ । एक दिन रामशाह पथस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेँ । त्यहाँबाट टेकु पठायो ।
जसोतसो छोराको नाममा अपांग भत्ता मिल्यो । उसको नाममा मासिक दुई हजार आउँछ । छोरीका लागि पनि त्यो भत्ता मिलाउन लाख कोशिस गरें । स्वास्थ्य मन्त्रालय पटक–पटक धाएँ । त्यहाँका सचिव, सहसचिव, मन्त्रीका पिएलाई भेट्न खोजें । तर, हामी जस्ता काम न काजका मान्छेलाई कसले भेट दिने ? सबै व्यापारी र नेताको पछाडि लागेका छन् । ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन…’ भने जस्तो भएको छ । जे मा पनि सोर्सफोर्स चल्ने यो मुलुकमा यो छुसी ठेला चालकको छोरीलाई अपांग भत्ता कसले मिलाइ दिने ? सोर्सफोर्स लगाई दिने कसले ?
हजार प्रयास गरेँ, कतैबाट केही तार लागेन । क्यान्सर लागेकी श्रीमती, त्यहीमाथि मानसिक रोगी । कसैले सुनायो चर्चमा लग्यो र क्रिस्चियन बन्यो भने निको हुन्छ । आशा जाग्यो । हामी जस्ता मान्छेसँग बाँच्नका लागि त्यही आशाको एक सानो त्यान्द्रोमा त सास अडेको हुँदो रहेछ । क्रिस्चियन बनेर न श्रीमतीको व्यथा घट्यो न त मेरो दुःख ! ‘बर्मा गए कर्मसँगै….’ भनेझैं डाक्टरले निको पार्न नसकेको रोग क्रिश्चियनले कसरी निको पार्न सक्थ्यो ? छोरालाई बेल भिजनमा भर्ना गरेको थिएँ, खर्च धान्नै सकिनँ ।
केही समयअघि मात्र सेलिब्रेटीहरूले सम्बन्धविच्छेद गरेको सुनें । अचेल शहरमा मौलाएको छ आधुनिकताका नाममा वर्ष दिन नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद गर्दै हिँड्ने धन्दा । २२ वर्षे सम्बन्धलाई समेत ‘स्वतन्त्रताको नाममा’ तोड्नेहरू देखिए । श्रीमती र बालबच्चा छाडेर अर्काे खोज्न जानेहरू पनि छन् तर अहँ जीवनमा कहिल्यै त्यतातिर मन गएन ।
आज मरे भोलि दुई दिन । एक बारको जीवनमा कसैमाथि घात र प्रतिघात गरेको छैन । सग्लै छु । कुनै घाउ खत चोट लागेको छैन । सायद यिनीहरूकै लालनपालन गर्नका लागि होला । म बिरामी भएँ भने यिनीहरूको बिचल्ली हुन्छ । कहिलेकाहीँ सोच्छु र टोलाउँछु । मभन्दा दुःखी यिनीहरू छन् । यिनीहरूलाई छाडेर म कहाँ भागुँ ? कहाँ जाऊँ ? जति दिन बाँच्छु यिनैका लागि बाँच्छु र जति दिन हाँस्छु यिनैका लागि हाँस्छु ।
जीवनबहादुर रम्तेलकाे कथा व्याथा (जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ओखलढुङ्गा, ९ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्रष्टाका सपनालाई सबै मिलेर साकार पार्नुपर्ने बताएकी छिन्
सुन्नुहोस् न झ्याल थोरै खोलौँ न है ? कानमा ठोक्किन आईपुगेको न्यानो तथा अपरिचित आवाजले
ब्ल्याक नाइट गाउन (आधुनिक कथा)
बर्खा आफ्ना अन्तिम दिनहरूमा काठमाडौँको खाल्डोलाई भिजाउने प्रयत्नमा थियो । घडी हेरें पौने छ बजिसकेछ